“Buffon Oo U Digey Ronaldo Uuna Sheegay Inu Guul Daraysan Doono Kulanka Kama Danbeystah Ee Caawa - Wargane News
Home Sports “Buffon Oo U Digey Ronaldo Uuna Sheegay Inu Guul Daraysan Doono Kulanka...
Gianluigi Buffon laga yaabee inuu yahay goolhayaha ugu fiican ebid taariikhda kubbada cagta laakiin Ronaldo kuma garaaci karo abaal marinta laacibka ugu fiican adduunka ee Ballon d’Or sida uu qabo Roberto Carlos.
Ronaldo ayaa iminka xafidanaya abaal marintan wuxuuna doonayaa inuu ku guuleysto markiisii 5-aad si uu isaga bareejeeyo Lionel Messi.
Inkastoo ay jirto inuu Ronaldo ku jiro qaab ciyaareed sare misane waxaa jira taageero soo koreysa oo abaal marinta Ballon d’Or la dooneysa goolhaye Buffon kaddib sanadkii wacnaa uu Juventus la qaatay xilli ciyaareedkan.
Yeelkeede, daaficii hore ee Real Madrid ayaa aaminsan inaysan shaki ku jirin in Buffon uu leeyahay taariikh wayn balse uu Ronaldo sii wadan doono ku guuleysiga Ballon d’Or.
“Dabcan, Buffon waa goolhayaha ugu fiican taariikhda laakiin waxa uu Cristiano Ronaldo sameynayo, way adag tahay in laga qaado Ballon d’Or, waa kan ugu fiican kubbada cagta adduunka.”. Carlos ayaa sidaa u sheegay Goal ka hor kulanka caawa ee Final ka Champions League ay Juve iyo Real isku fara saari doonaan magaalada Cardiff.